I-Limon Playa Bonita icocekile kwaye ikhuselekile. - I-Airbnb
I-Limon Playa Bonita icocekile kwaye ikhuselekile.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRoy
Indawo egqibeleleyo, phambi kwePlaya Bonita, ekwimizuzu eli-10 ukusuka eLimón Centro. Indawo ezolileyo nekhuselekileyo, kunye nokufumaneka kwendawo yokupaka ngesango lombane. Ine-air conditioning egumbini, inefenitshala, inesibonelelo senkonzo yokutya kwigumbi (Isiqinisekiso sangaphambili). Inebalcony enembono entle elunxwemeni. Yindawo epholileyo, apho unokubona imihlaba emihle, iintyatyambo kunye nezilwanyana ezikungqongileyo. Ukufikelela ngokulula ngemoto kunye / okanye ngenkonzo yebhasi.
Inegumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, indawo yokuhlamba impahla, i-balcony kunye neendawo zokupaka iimoto. IWiFi, iTV, ikufutshane neNdawo yaseLwandle, indawo yokutyela kunye nePaka yoLonwabo yaseCariari. Ifumaneka kwimizuzu eli-10 ukusuka edolophini eLimón. Indawo yokumisa ibhasi ngaphantsi kweemitha ezingama-50.
4.70 · Izimvo eziyi-30
Ngaphakathi kwezixhobo kukho indawo ezolileyo nekhuselekileyo. Kwindawo ezingqongileyo ungayonwabela kwaye wazi ngokuzola.
Umbuki zindwendwe ngu- Roy
Saludos, Mi nombre es Roy, soy de Limón, me gusta el mar, la naturaleza, soy amante del surf, disfruto cocinar y conocer nuevas personas. Busco ofrecer un buen servicio a cada uno de mis huéspedes, deseo que cada uno disfrute y aproveche la estancia. Así que por acá los esperamos.
Saludos, Mi nombre es Roy, soy de Limón, me gusta el mar, la naturaleza, soy amante del surf, disfruto cocinar y conocer nuevas personas. Busco ofrecer un buen servicio a cada uno…
Sisesandleni sabathengi ngefowuni. Nanini na kukho ingxaki singakunceda buqu.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 13:00 - 01:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moín